तपाईलाई पिनाश छ ? उसोभए थाहा पाउनुहोस यसका लक्षण,समस्या र समाधानका उपायहरु – Ramailo Sandesh
पिनासका लक्षणहरु: पिनास भएका व्यक्तिको नाकबाट गन्ध आउने र बाक्लो सिँगान बगिरहने समस्या हुन्छ। लगायतार नाक बन्द भइरहनेसमस्या हुन्छ। लगायतार नाक बन्द भइरहने समस्याले टाउको दुख्ने र भारी हुनुका साथै निधारको अघिल्लो भाग दुखिरहने गर्छ । नाकमा सिगान जमेर बन्द हुने भएकाले पिनासका रोगीमा सुङ्ने शक्तिमा कमि आउँछ। कसैकसैमा विशेष गरी एक्युट पिनास भएमा ज्वरो आउने र जीउ दुख्ने समस्या देखा पर्छ।
सार्थक काम; चुरोट पिउन छोड्नेलाई ६० हजार रुपैयाँ पुरस्कार ! जान्नुहोस